Nagu Saabsan - Hebei Med Site Medicines Co., Ltd.
Afartaa saaxiib ayaa asaasay daawooyinka Hebei Med Site Co., Ltd. sanadkii 2005 sababtuna tahay dib-u-habeynta shirkadii hore. Kheyraadka wanaagsan ee ganacsiga shisheeye iyo kooxda xirfadda leh had iyo jeer waa faa'iidadeena adag. Muddo yar gudaheed, waxaan ka diiwaan gashanay qaar ka mid ah dawooyinka iyo qalab caafimaad oo lagu tuuri karo dalal dhowr ah waxaanan haysanay iibsi deggan. Tani waxay xaqiijineysaa awooddeena aan ku leenahay suuqyo badan oo aan isku dayno goobo ganacsi oo cusub.
Hadda waxaan heysanaa kooxo fiican oo loogu talagalay alaabada kaydka uumiga (jirka kujirta oksijiyeyaasha, nebulizer ultrasonic, nuugida xawaaraha la qaadan karo, qalabka soo nuugida), joodariga daawada anti-decubitus hawada, bacaha wasakhda iyo bacaha kaadida, sheyga daryeelka guriga (qalabka heerkulka bulsheed, heerkulbeegga madaxa wejiga, kormeerka cadaadiska dhiiga elektiroonigga ah, kormeerka cadaadiska dhiiga elektiroonigga ah) , sphygommanometer, heerkulbeegga, stethoscope, garaaca wadnaha), dawooyin kale oo la adeegsan karo & difaac (waji waji, galoofyada, koofiyadaha, daboolida kabaha, gogosha, gogosha, gogosha sariirta, gacma gashiga, xubnayaasha taranka, iwm.) iyo sahayda daaweynta baxnaaninta (sariiraha isbitaalka, qoorta taakuleyn, kuraasta curyaanka, alwaaxyada, ulaha, iwm).
Dunaliella salina waa sheyga dahabka u ah caafimaadka bani aadamka ee maalmahan, maaddaama ay ka kooban tahay iyada oo la raacayo saamiga walxaha ku jira dareeraha jirka iyo plasma unugyada, waxayna si toos ah u kobcin karaan unugyada waxayna xallin karaan dhibaatada unugyada. Dad aad u tiro badan oo adduunka oo idil ayaa u isticmaala oo u daweeya sidii ay yihiin agabkii ugu horreeyay ee caafimaad ilaaliya.
Saaxiibkayaga ugu weyn-Inner Mongolia Lantai Industrial co., Ltd wuxuu caan ku yahay hodanka dabiiciga ah iyo dunaliella sare ee adduunka. Farsamada sare ee soosaarka, alaabada Dunidaella ee salina waxay soo jiidataa iibsadeyaal aad u tiro badan.
2019-nCoV waxay wax yeeleysaa nolosheena ilaa Janaayo 2020, Dharka ilaalinta ee warshadeena ayaa laga isticmaalay Wuhan halkaasna door muhiim ah ayey ka ciyaarayaan. Hada xirmada baaritaanka degdega ah, maaskaro wajiga lagu daweyn karo, maaskaro qalliin, muraayadaha difaaca, lebbis ilaalin ah, galoofyada ...... si dhakhso leh ayaa loogu gaarsiiyey dalal kale iyadoo si dhaqsi leh noogu soo baxday.
"Tayada koowaad, ugu horreysa adeegga, hufnaanta shaqada, nolosha oo faraxsan" waa hiigsigeenna.
Halkan ka dooro, oo halkan ku qanac ......